Duolingo: Learn Languages Free 3.106.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.106.5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ပညာေရး Duolingo: Learn Languages Free
Duolingo: Learn Languages Free ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
စပိန်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, အီတလီ, ရုရှား, ပျေါတူဂီ, တူရကီ, ဒတျချြအိုငျးရစျ, ဒိန်းမတ်, ဆွီဒင်, ယူကရိန်း, အက်စပ, ပိုလန်, ဂရိ, ဟနျဂရေီ, ဘှ, ဟီဘရူး, ဝလေနှင့်အင်္ဂလိပ်လေ့လာပါ။
လုံးဝပျော်စရာနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အသစ်! ဆွာဟီလီများနှင့်ရိုမေးနီးယား။
ဂိမ်းကစားနေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့စကားပြော, ဖတ်ရှုခြင်း, နားထောင်ခြင်းနှင့်အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်! သငျသညျမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းများနှင့်သင်ခန်းစာများကိုဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ဝေါဟာရနှင့်သဒ္ဒါကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ အခြေခံကြိယာ, စာပိုဒ်တိုများနှင့်စာကြောင်းများနှင့်အတူစတင်ပါနှင့်နေ့စဉ်အသစ်သောစကားလုံးများကိုလေ့လာပါ။
• Google Play ရဲ့အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့် 2013 ခုနှစ်နှင့် 2014 ခုနှစ်၏ "အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး"!
• "ဝေးနဲ့ဝေးကိုအကောင်းဆုံးဘာသာစကား-သင်ယူမှု app ကို။ " ရတာဟာ Wall Street Journal က
• "Duolingo ပညာရေး၏အနာဂတ်ရန်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကိုင်ထားလိမ့်မည်။ " -TIME မဂ္ဂဇင်း
• "ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူခြင်းများအတွက် apps များအနက်, သင်တို့သည် Duolingo ရိုက်နှက်လို့မရပါဘူး။ " -PC မဂ္ဂဇင်း။
• "အစဉ်အဆက်ရှာဖွေတွေ့ရှိအခြိနျဆှဲ၏အများဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနည်းလမ်းများ။ အဆိုပါအတိုသင်ခန်းစာလုပ်ကွက်နာကျင်မှု့မရှိတာနဲ့ peppy ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လာမယ့်အဆင့်ကို (နှင့်ထိုနောကျအဆငျ့) သို့ရောက်ရှိစွဲလမ်းဖြစ်လာသည်။ " -Slate
•ဒါကြောင့်ထိရောက်သောပါပဲ။ Duolingo 34 နာရီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ-Level ပညာရေး၏တစ်ဦးစာသင်ညီမျှကြသည်။
android@duolingo.com မှမဆိုတုံ့ပြန်ချက် Send
https://www.duolingo.com မှာ Web ပေါ်ရှိ Duolingo ကိုသုံးပါ
Duolingo: Learn Languages Free အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Duolingo: Learn Languages Free အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Duolingo: Learn Languages Free အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Duolingo: Learn Languages Free အား အခ်က္ျပပါ
hibelka7 စတိုး 1 1.51k
Duolingo: Learn Languages Free ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Duolingo: Learn Languages Free အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.106.5
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.duolingo.com/privacy
လက်မှတ် SHA1: A0:0B:B7:D9:2E:38:90:9C:2F:6C:04:A8:05:58:89:0E:52:94:9C:D9
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Vicki Cheung
အဖွဲ့အစည်း (O): Duolingo
Duolingo: Learn Languages Free APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ